Home AKWINGKWỌ UKWUKA FOOTBALL Ndị egwuregwu bọọlụ Bekee Danny Rose Child Story Plus Ihe Na-emeghi Ihe Ozo
LB na-egosi Full Story of a Football Genius kasị mara aha na aha njirimara; 'Broadway'. Anyị Danny Rose Child Akụkọ ya na enweghị akwụkwọ akụkọ Eziokwu na-ewetara gị akụkọ zuru oke nke ihe ndị a ma ama site na nwata ruo n'oge.
Nyocha nke Ex-Spurs na ndị ọkachamara na-asụ Bekee na-agụnye akụkọ ndụ ya tupu ama aha ya, ndụ ezinụlọ / ndabere, ndụ mmekọrịta na ọtụtụ ihe ndị ọzọ OFF-Pitch (amachaghị) banyere ya.
Ee, onye ọ bụla maara banyere ọrụ ya dị ka onye na-awakpo aka ekpe ma ọ bụ naanị mmadụ ole na ole tụlere Danny Rose's Bio nke bụ ihe na-atọ ụtọ. Ugbu a na-ebuteghị ọzọ, ka anyị bido.
Akụkọ Danny Rose nke nwata - Ndụ mbido:
Daniel Lee Rose a mụrụ na 2nd ụbọchị nke July 1990, na Doncaster, United Kingdom na ndị nne na nna Jamaica. Amuru ya nne ya Angela Rankine Rose na nna ya, Nigel Rose.
Mmadu enweghi ike ikwurita banyere oge Rose n'emeghi enyi ya na nwata ya na Jamaica Kyle Walker ha abụọ toro na Yorkshire, Northern England. Danny dị ọnwa karịa Kyle onye ya na ya nọrọ ọtụtụ afọ ọbụbụenyi.
Danny Rose Biography Eziokwu - Ọganihu Football:
Danny na Kyle nwere mmalite ịmalite ịgba bọl na-agba bọl ma na-egwu egwuregwu asọmpi n'oge ụbọchị ụlọ akwụkwọ ha na Yorkshire. Danny mechara ghọọ ngwaahịa nke Leeds United agụmakwụkwọ ntorobịa ebe ọ malitere njem ya wee bụrụ onye ama ama na 2005. Ọ gosipụtara arụmọrụ dị egwu nke mere ka ọ nwee ọganihu site na ọkwa ndị ntorobịa tupu ya enwee ike ịkwaga na Tottenham Hotspur ugbu a na July 2007. Ndị ọzọ , dị ka ha na-ekwu, bụ akụkọ ihe mere eme ugbu a.
Danny Rose Bio - Nwanyị nwanyị, Nwunye, Nwa?
Danny Rose bụ otu n'ime ndị na-agba ọsọ ụkwụ dị egwu bụ ndị hụrụ n'anya ka ha na-enwe mmekọrịta dị ka nke onwe dị ka o kwere mee.
Ọ bụ ezie na enweghị ndekọ doro anya nke Rose dị ugbu a ma ọ bụ mmekọrịta ndị gara aga, a hụrụ ya na 2014 ka ọ na-ekpori ndụ nke ọma na nke na-acha odo odo nke akọwapụtara nke ọma dị ka onye ibe ya na osimiri dị na Barbados.
Danny Rose Racist Serbs:
Danny bu ndi mmadu na-agba egwu ndi mmadu n'agba egwu tupu ha ezigara ya mgbe eziputa ikpeazu maka ikpuchi obi n'ime nchikota ndi mmadu.
Bọchị mgbe ihe ahụ mechara, a gwara ndị egwuregwu Serbia na ndị ọrụ ha na egwuregwu ahụ ka ha kwuo okwu banyere ihe ahụ mere ebe kọmitii ịdọ aka na ntị nke Serbian Federation nwere nnọkọ pụrụ iche n'okwu ahụ. N'oge na-adịghị anya, UEFA mechara weta ebubo megide ụlọ ọrụ na ndị na-agba ya.
Ndụ Danny Rose na Ndụ:
Danny Rose toro na ezinụlọ egwuregwu. Anyị na-ewetara gị nkọwa gbasara ezinụlọ ya.
Nna: Nna Danny Rose, Nigel Rose (nke dị n'okpuru ebe a) bụ onye na-akwado nkwado nwa ya nwoke.
Na 2012, o gosipụtara iwe na Danny tinyere usoro egwu nke ndị Serbia na-enweghị obi ụtọ, mmepe nke ọ kwụrụ site n'ịgụ ihe ndị a.
“Enweghị m ike inyere nwa m nwoke aka. Ikiri ka a na-eme ya egwu egwu agbụrụ na ịtụ ya nkume bụ ihe siri ike ịnara. Ọ bụ n'ezie nrọ ọjọọ ”
Nne: A maghị banyere nne Danny Rose, Angela Rankine bụ onye a wakporo ya na nwa ya nwoke yana nwanne nna ya, Mark na Hugh Rankine n'oge ezinụlọ n'abalị.
Ihe ahụ merenụ mere na Doncaster Town mgbe a gwara Danny na nwanne nna ya ka ha pụọ ​​cafe n'ihi na ndị na-eri nri na-eme mkpesa na ha na-eme oke mkpọtụ - ọ bụ ezie na ha na-agọnarị na ha na-eme mkpọtụ, ndị uwe ojii na-eme ihe ike bụ iwu nke ụbọchị ahụ.
N'ịkọta oge obi ọjọọ na-eme ka Angela Rankine gosipụtara na;
“A kpaliri Danny ọtụtụ ugboro ma mgbe m jụrụ bouncer ahụ ka ọ kwụsị, ọ kpọrọ ndị uwe ojii…Emebeghị m ihe ọ bụla mana ha dọkpụrụ m na vangbọala ndị uwe ojii kpọchiri m.
Ihe anyị na - enweghị ike ịghọta bụ ihe kpatara ha ji chọọ ịgba mmanụ gas na Danny mgbe ejiri ọla atọ jide m. Ekwesịrị iji ya naanị mgbe ndị ọrụ nchekwa nọ n'ihe egwu.
NNE: Danny nwere nwanne nwoke nke nta nke amara dika Mitch Rose onye na-egwu egwu ugbu a Grimsby Town. E wezụga Mitch, Danny nwere nwanne nwoke ọzọ a maara dị ka Mitchell Rose. Ma Mitch, Mitchell na Danny bụ ụmụ nwanne nne Michael Rankine.
Danny Rose Biography - Ntughari Ntughari Ntughari:
Danny Rose mere ka ịkọ nkọ banyere ọdịnihu ya na Tottenham site na iji ntutu na-acha uhie uhie gosipụta ya.
N'oge na-adịghị anya, ndị na-anụ egwuregwu bọọlụ kwuru maka ọdịnihu maka ọgụgụ isi bọọlụ na Manchester United, ma ọ bụ Liverpool, mmepe nke kpatara ụjọ nye ndị Spurs.
Otú ọ dị, Danny wepụtara oge iji dokwuo anya ọdịdị ya site n'ikwu nke ahụ
"Emere m ya n'ihi na Roses bụ Red"
Oge a kara akara mmalite nke nkọwagharị Danny dị ka ndị na-atụ aro. N'oge na-adịghị anya Rose kwupụtara na ya nwere mmasị ịbanye na klọb ọzọ wee gbanwee echiche ntutu ya site na 'Roses' ka ọ na-atụ egwu ojii.
Danny Rose Biography - Mmekọrịta ya na Pochettino:
Danny nwere mmekọrịta dị ukwuu na Tottenham Manager, Pochettino. Nke a mere e ji kpọọ ya "Nwa nwoke na-agba ọsọ".
Mba England na-ekwu na ọ na-ele onwe ya anya onye nkuzi nkuzi n'ihi na ọ na-etinye oge karịa na ọfịs Pochettino karịa nke ọ bụla n'ime ndị ibe ya. Igosipụta eziokwu ahụ na Standard Night Danny gosiri na;
“Ana m aga n'ọfịs onye ahụ na-arụ ọrụ ya mgbe mgbe, mụ na ya amalitekwala ịdị ná mma kemgbe ọtụtụ afọ. Anyị na-ekwu ọtụtụ okwu. ”
Danny Rose Biography - Agha Na Mwute:
Danny nwere otu ịda mbà n'obi nke mmerụ ahụ kpatara nke mere ka ọ ghara ịhapụ ihe a na-eme na bọlbụ karịrị ọnwa 8.
Na mgbakwunye, nwanne nna ya gburu onwe ya n'oge ahụ ka a na-akparị nne ya. Iji kpoo ya niile, ọ fọrọ nke nta ka ọ gbaa nwanne Danny ihu na ihu.
Nnwale dị ukwuu nke oge ahụ nke dị ukwuu nke na Danny ga-achọ enyemaka ndị ọkachamara site na ịchekwa ọrụ nke Ọkammụta.
Achọpụtara na ọ nwere ịda mbà n'obi, ọnọdụ uche nke ọ meghere banyere ya n'oge nkenke nchịkọta akụkọ nke ndị England Squad n'ihu 2018 ụwa cup na Russia.
“Ọ bụghị ihe nzuzo na enwere m oge ule na Tottenham n’oge a, nke mere ka m hụ onye ọkà n’akparamàgwà mmadụ, achọpụtakwara m na m nwere nkụda mmụọ, nke ọ na-enweghị onye ma, m wee pụọ na Tottenham.
Na-ekpughe nsogbu ndị ọzọ na-enyereghị aka melite ọnọdụ ahụike ya n'oge ahụ, Danny gosipụtara nke ahụ;
N'elu ubi ahụ, enweela ihe ndị ọzọ - n'August, a na-emegbu mama m n'ụlọ na Doncaster.
O were iwe nke ukwuu na iwe banyere ya, na mgbe ahụ onye bịara n'ụlọ na ọ fọrọ nke nta gbaa nwanne m nwoke ihu. Ọ bụ oge ule. ”
Otú ọ dị, Danny etinyewo ihe nile n'azụ ya ma laghachi azụ n'ubi egwuregwu iji nye ndị ọkpọ ọrụ ndị dị egwu ha chọsiri ike n'oge ọ na-emejọ ya na-enweghị.
Nyochaa: Daalụ maka ịgụ Danny Rose's Childhood Story tinyere akụkọ eziokwu dị oke ọnụ. Na LifeBogger, anyị na-agbasi mbọ ike maka izi ezi na ịkwụwa aka ọtọ. Ọ bụrụ na ị hụ ihe na-adịghị ele anya n’isiokwu a, biko tinye okwu gị ma ọ bụ kpọtụrụ anyị!